Kulanka 10aad ee Jaaliyadda Mataan Cabdulle ee Toronto
Toronto,20th August 2017
Waxaa shalay oo ku beegnayd taariikhda 19ka August sanadkan 2017 lagu qabtay mid ka mid ah beeraha nasashada magaalada Toronto ee dalka Kanada xaflad lagu maamuusayay kulanka 10aad ee Jaaliyadda ku abtirsata Beelweynta Beesha Mataan Cabdulle oo ay ka soo qayb galeen dhamaan xubnaha qoysaska ay ka kooban yihiin ,xaasleyda,caruurta,dhalinyarada rag iyo gabdho,indheer-garadka iyo haweenka.
Xafladaas oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxay ahayd mid loo qabtay qaab qado-dibadeed ah ( Picnic & barbecue ) waxayna dhamaan xubnihii ka soo qaybgalay kulankaas ay ku qaateen waqti aad u wacan, ayagoo ku qadeeyay beertaas iyo hawadeeda neecawda leh, iskuna bartay intii aan is-aqoon ayagoo isku soo qaaday ka hadalka wax allaale wixii dan u ah bulshadaas guud ahaan, gaar ahaana ku dhaqanka jidka toosan ee diinteena Islaamka na fareyso.
Waxaa kaloo xusid mudan in iyadoo inta badan ka soo qayb-galayaasha xafladdan ay ka yimaadeen magaalada Toronto iyo degmooyinka ku wareegsan, in ay iyana jirtay qoysas ka yimid magaalooyinka dalka Mareykanka, gaar ahaana magaalada Columbus iyo waliba dalka Ingiriiska iyadoo ugu danbeyn Odayaasha looga danbeeyo hogaaminta beesha laga dhageystay erayo waano u-ah bulshada iyo duco-faatixa ah oo loogu duceeyay xubno ka xanuunsan Jaaliyadda. Ilaahay ha caafiyo inta xanuunsan... aamiin Yaa Allah.
Gebegebidii kulankaas ayaa waxaa looga soo jeediyay goobtaas hadalo guubaabo iyo mahadnaq u-ah xubnihii ka tirsanaa guddiga qaban-qaabada xafladdan gaar ahaana Mudane Cabdulasiis M. Hilowle oo ku magac dheer Qasaaye, Mudane Imaan Nuur Shuukow, Marwo Shukri Hilowle Abukar (Shiino) iyo Mudane Abdilfatah Ali.
Si dhabtu tahay, waa tallaabo ku dayasho mudan oo looga baahan yahay dhamaan jaaliyadaha ku dhaqan dalalka adduunka inay ku dhaqaaqaan maxaa yeelay waa aas-aas lagu barayo jiilka cusub ee dhalinteena ah,gaar ahaana kuwa ku dhasaha dalalka dibedda ah abtir-siinyadooda iyo halka asalkoodu yahay, si ay iyana u-baraan kolka ay caruur yeeshaan sidaad oo kale dhalinta ay dhali doonaan dhaxalkooda.